Xeer Illaaliyaha Qaranka: Ma aaminsani iney Soomaaliya Lambar Kow ka tahay dalalka ugu musuqa badan aduunka – Kalfadhi
December 9, 2018 December 9, 2018 Kalfadhi
Xeer Illaaliyaha Guud ee Qaran, Axmed Cali Daahir, ayaa beeniyey iney Soomaaliya lambarka 1-aad uga jirto dalalka uu musuqu la dagay. Isaga oo maanta gudaha Xarunta Xalane ee Muqdisho uga qeyb galayey munaasabad lagu xusayey Maalinta Ladagaalanka Musuqa Aduunka, oo maanta ku began, ayuu sheegay iney tahay mala awaal ineysan jirin cid Soomaaliya ka musuq badan. “Aniga ma qabo fekerka ah in Soomaaliya ay lambarka koowaad ka tahay dalalka ugu musuqa badan, laakiin mala awaalka ayaa sidaas ah, taas ayaana nalaga rabaa inaan baabi’inno” ayuu yiri Xeer Illaaliyaha Qaranka.
Waxa uu sheegay iney tahay nasiib darro in dalal Soomaaliya ka musuq badan lagu aamino hanti iyo hawl iyada lagu caawinayo, “sabab la xiriirta” buu yiri “mala awaalka ah inaan musuqeyno wixii nalagu caawinayey haddii naloo gacan geliyo”. Waxa uu yiri “Marka la yiraahdo waxaan laguuma dhiibi karo, sababtoo ah waad musuq-maasuqeysaa, oo cid kale ayaan u dhiibaneynaa oon ognahay iney naga musuq-maasuq badan tahay, anagaa nalaga rabaa inaan saxno”.
Hase ahaatee, waxa uu Xeer Illaaliyuhu sheegay ineysan taas macnaheedu ahayn inuusan Soomaaliya ka jirin musuq. Waxa uu tilmaamay in musuqa ku haya dalka dhibka ugu weyn ay tahay eexda, qiyaanada iyo nin jecleysiga. Waxa uu sheegay in ay sanadkan ku guuleysteen 4 kiis oo musuq la xiriira in ay dadkii geystay maxakamadi xukunto, “laakiin waan ku caadaabanay” buu yiri Dr. Axmed Cali Daahir. “Inaad la dagaalanto musuqa waa adoo dhimbil dab ah gacanta ku haaya. Waxa uu cadaadisku ka imaanayaa shacabka, madaxda qaranka iyo xildhibaannada” ayuu yiri Xeer Illaaliye Axmed Cali Daahir.
Marka la rabo in lala dagaalamo Musuq waxa uu sheega iney ubaahan tahay in la sameeyo sharci iyo hay’adihii dabaqi lahaa, oo loodhameystiray agab iyo dad karti leh, oo leh ama la siiyey aqoon iyo xirfad ay kushaqeeyaan. “Taas waxay ka falantaa” buu yiri “Baarlamaanka, Madaxweynaha iyoXukumadda. “Haddii la rabo in wax laga qabto musuqa, yaan dib loo dhigindhismaha Guddiga Ladagaalanka Musuqa” ayuu yiri Xeer Illaaliyuhu.
Waxa uu tilmamay in kaalinta ugu muhiimsan ayshacabku ka qaadan karaan la dagaalanka musuqa, taasna waxa uu sheegay iney kuimaan karto wacyigelin fara badan oo la siiyo dadka. “Marka uu qof kastadoorkiisa qaato ayaa la dhihi karaa waa lala dagaalamay musuqa” ayuu yiri AxmedCali Daahir. Laakiin, waxa uu sheegay in ay ka dowlad ahaan si adag uladagaalamayaan musuqa. “Waxaa naga go’an inaan la dagaalanka musuq-maasuqa uwajahno si dhab ah, dowlad ahaan iyo shacab ahaanba”.